admin – Qaran24
Wasiir Ka Tirsan Wasiirada Somalia oo Ka Hadlay Arinta La Xiriirta Dacwada Bada Ee Somalia Iyo Kenya
Warar xog-ogaal ah oo aan ka helnay magaalada Nairobi maanta oo ay taariikhdu tahay 07/02/2018, waxay sheegayaan in uu kulan qarsoodi ah dhexmaray Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Avv. Xassan Xaaji Xuseen iyo Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Kenya Githu Muigai.
Isla markaana Soomaaliya ay ka tanaasusho dacwadda ka furan Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (Hague), taasoo sida xogta sheegayso Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya Avv.
Xassan Xaaji Xuseen uu ballanqaaday inuu kala shaqaynayo dawladda Kenya sidii ay Soomaaliya ugu tanaasuli laheyd dacwaddaa arrintana ku soo celiyo miiska wadahadalka.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka JFS Oo Maqaamka Muqdisho Sheegay Inta Nuuc Uu Noqon Karo
“Maqaamka Muqdisho waa laga hadlaa gambasho malahan waana lasoo gudbiyay saddex nuuc ayuu noqon karaa maqaamka caasimadda Saddexdaasi oo kala ah inay noqoto degaan Federal oo ay noqoto sida Waashitoon waxay toos u hoostagee dowladda dhexe xuduudeheeda ayaana la sameynaa iyadoo xubno ku yeelaneysa kaliya Golaha Shacabka,
nidaamka kale waa inay noqotaa magaalo Madax Dowlad Goboleed ah mida sadexaadna waa inay noqotaa magaalo madax ku dhex taalo Dowlad Goboleed maka saddexdaas qaab ayaa midkood la dooranaa waana lasameynaa waliba waxaaa lagu cadeynaa dib u eegista dastuurka.” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka.
“Arrinta dhismaha Guddiga adeega Garsoorka waxay ku xiran tahay in naloosoo gudbiyo ,ilaa hada mudo la siiyay majirto laakiin hadii la keeni waayo qasab ayay noqoneysaa in muddo la siiyo, hadana waxaa gacanta ku haya Guddiga garsoorka ee Baarlamanka iyo Wasaaradda Cadaaladda ayagaana howshaas ka sugeynaa,
ayaan dhaweed mar bay ku dhawaadeen inay howshaas soo dhameeyaan marka kalfadhigaan waa inay keenaan arrintaasi” Ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Arrimaha kale ee Golaha Shacabka horyaala ayuu sheegay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari inay kamid yihiin qabyo tirka Dastuurka,
sameynta shuruucda Doorashooyinka, hirgalinta nidaamka axsaabta iyo dhismaha Xarunta Baarlamanka oo loo dhisi doono qaab casri ah islamarkaana Dowladda Turkiga ay arrintaasi ka caawineyso Soomaaliya.
Tiro Dad Ah Goor Dhow Cudurka Shuban Biyoodka Ugu Geeriyooday Magaallada Jowhar
“Waxaa noo timid Bishii Janaayo 12-keeda ilaa 28-keedi 155 Bukaan,Bishan Febraayana waxaa noo yimid 62 qof,dhimashadu waa 5,saaki waxaa noo jiiftay 37,waxaan bixinay 4 qof hadda waxaa jiifta 33,
waxaad moodaa in ay sii kordhayso tirade dadka uu soo ridanayo Cudurka,Marka waxaan ugu baaqeynaa Hay’adaha Caafimaadka iyo Maamulka Hirshabeelle in ay dadkan u soo gurmadaan”.Ayuu yiri Agaasime C/raxmaan Cali.
Dad Goor Dhow Koonfur Afrika ugu geeriyooday hilib Sumaysan Oo Ay Cuneen
Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo ku sumoobay Hilib ay isticmaaleen,iyadoo Dowladaha kala ah Namibia, Zambia Iyo Bostwana oo deris lah Koonfur Afrika ay hakiyeen hilibkii ay ka soo dhoofsan jireen Dalkaasi Koonfur Afrika.
Cudurkan ayaa ka dilacay Dalka koonfur Afrika,kaasi oo la sheegay in ay sabaabtay Bacteria loo yaqaano Listeria,taasi oo ka dhalatay hilib Warshadeysan oo Wadankaasi laga Istimaalay,iyadoo dadka dhintay ay gaarayaan ilaa 180 ruux sanadkii tagay.
Sida la aaminsanyhay asal ahaan wuxuu hilibkan ka yimid warshad ku taalla magaalada waqooyiga ah ee Polokwane ee Dalkaasi Koonfur Afrika,Balse Agaasimaha shirkadda Tiger Brands oo leh warshadda ayaa sheegay in aysan jirin wax xiriir toos ah oo ka dhaxeeya dadka dhintay ee 180-ka ah iyo badeecada shirkadda.
Xukuumadda Pretoria ee Koonfur Afrika ayaa bilowday qorshayaal looga hortagayo fiditaanka saameynta arrintani,iyadoo gebi ahaanba Bakhaarada lagu iibiyo Hilbahaasi Warshadeysan laga sifeynayo,maadaama cuduro ay ka dhasheen.
Dhanka kale Dowladda Malaawi ayaa ganacsatada Dalkeeda ka codsatay inay dukaamada iyo goobahooda ganacsi ay ka saraan hilibka laga keeno dalka Koonfur Afrika iyadoo Dowladdu ay ka baqanayso in ay dad ku sumoobaan hilibkaasi Warshadeysan.
Sidoo kale war ay soo saareen qaar kamid ah Ha’yadda qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in la rumeysan yahay in cudurkani uu yahay caabuqa ugu wayn ee dunida oo idil ka dillaacay,kaasi oo saameyntiisa leh.
Wakaaladda Wararka Reuters ayaa qortay in ay jiraan 948 dhacdo cudurkan listeria dad uu soo ritay kaasi oo laga qaado hilibka sumaysan sanadkii 2017-kii, iyadoo Qaramada midoobay ay ku tilmaantay tiradii ugu badnayd adduunka.
Daawo Sawirada: Madaxweyne Farmaajo oo kormeer Ku Tagay xeryo ciidan oo ku yaala duleedka Muqdisho
“Halkaan waxaan maanta idin kugu imid in aan idin soo kormeero oo aan arko Ciidamada iyo Saraakiisha loo diyaarinaayo in ay dalkooda, dadkooda iyo diintoodaba difaacaan.
Maanta sida qof walba ogyahay dalku waxa uu ku jiraa xaalad adag oo dagaal, xaaladda dagaalna waxaa loo baahan yahay in guud ahaan loo wada istaago difaaca Qarannimada Soomaaliyeed.” ayuu yiri Madaxweynaha oo khudbad u jeedinayey ciidamada.
Taliska Ciidanka Xogga Dalka Somalia oo Dowladda Turky-ga Ka Guddoomay Labis Ciidan Oo Dhameystiran
Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka somalia ayaa guddoomay Dareeskan Ciidan oo Dowladda Turkigu ay ugu talagashey Ciidamada Cirka iyo Badda oo ka mid ah Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed,
waxaana ay ka guddoomeen saraakiil kale oo ka socotay Wasaaradad Gaashaandhiga Dalkaasi Turkiga.
Dareeskan Dowladda Turkigu ay ugu deeqday Ciidamada Cirka iyo Badda Soomaaliya ayaa isugiu jiray dhar iyo kabaha buudka ah iyo agab kale oo labiska ciidamada laxiriira,
kuwaasi oo qeyb ka ah dadaalada ay dowladda Turkigu ay ku taageerayso ciidanka Xoogga Dalka.
Munaasabad kooban oo dareeskaasi loogu wareejinayay Ciidanka Xooga Dalka ayaa ka dhacay Xeraa Tababarka Jasiira,
waxaana Taliyaasha Ciidamada Cirka iyo Badda Admiral Madey Nuurow Sheekh Ufurow iyo Maxamuud Sheekh Cali deble Baylood ay balanqaadeen in ay u maareyn doonaan sidii loogu talagalay.
“Maanta waxaan halkani ku guddoomaynaa dareeskan oo Dowlada Turkigu inoogu deeqday,mana-ahan markii ugu horeysay,
waa markii labadaa oo deeq tan lamid ah ay inoo-keento Dowladda Turkiga,waxaan dhihi karnaa waa cusub ayaa inoo baryay,
anagana waxaan balanqaadaynaa in aan u maareyno sidii loogu talagalay”.ayuu dhahay taliya Ciidamada Cirka Admiral Madey Nuurow Sheekh Ufurow
Halis Xooggan Oo Kusoo Wajahan Magaalada Muqdisho Xili D F S Ay Idhaha Uun Ka Daawaneyso
Arin aad u halis badan ayaa xilligaan laga baqanayaa iney ka dhacdo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, somalia iyadoo DFS ay indhah ka daawaneyso.
Halistaan ayaa ah sicir barar xooggan oo ka dhaca Muqdisho, maadaama ganacsatada ay ka gadoodsan yihiin in canshuur lagu soo rogo.
Haddii Labo cisho ay sii xirnaadaan bakhaarada Suuqa Bakaaraha, waxaa hubaal ah in raashiinka yare e banaanka yaalla uu qaali noqon doono.
Shacabka ku nool magaalada Muqdisho aad ayeey dhibaato ugu noqon kartaa, waxaana ayna halis ugu jiraan dhankooda soo gaarto iyaga.
Rasmi:Xarakada Al-shabaab Oo Bilaabay Iney Toogtaan Shaqsiyaad La Sheegay Iney..
Dagaal Yahanada Al-shabaab ayaa waxay bilaabeen iney dilaan shaqsiyaad la sheegay iney ka waayeen lacago baad ah, waxaana ay ku eedeynayaan iney kamid yihiin Al-shabaab.
Shalay waxay fagaare ku yaalla deegaanka Buqda ee Hiiraan ku dileen nin ay sheegeen inuu yahay askari ka tirsan DFS, waxaana lasoo ogaaday xogta ninkaasi.
Ninkaan ayaa ahaa sida la tilmaamayo reer Miyi, waxaana uu Al-shabaab ka diiday inuu siiyo xoolo baad ah oo ay ku sheegayen Sako.
Markii uu diiday ayeey soo qabten, waxaana ay ku xukumeen dil, iyagoo durba toogtay. Cabsida weyn ee jirta ayaa ah rag kale oo AL-shabaab u xareysan in iyaguna la toogto maalmaha soo aadan.